यी दुई राशिबीच कहिल्यै सफल हुँदैन प्रेम र विवाह – Jagaran Nepal
०३ कार्तिक २०७८, बुधबार
यी दुई राशिबीच कहिल्यै सफल हुँदैन प्रेम र विवाह
Jagaran Nepal सोमबार, आश्विन ०४, २०७८
ज्योतिषशास्त्रको अनुसार प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन्। कुनै-कुनै राशिबिचको सम्वन्ध एकदमै नराम्रो हुने र उनीहरु विचको सम्वन्ध कहिन्यै राम्रो नहुने हुनाले प्रेम र विवाह गर्न नहुने सुझाव दिइन्छ। भने केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै मेलमिलाप पनि हुने हुन्छ।
जान्नुहोस्, जुन राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह गर्नु नराम्रो मानिन्छ ?
मिथुन र मकर: मिथुन राशिलाई मकरको जिद्दीपन र कुनै पनि कामलाई पूरा गरेरै छोड्ने बानी एकदमै मनपर्छ। यी राशिका व्यक्ति यति प्रभावित हुन्छन्, कि मकर राशिले जस्तै जीवनशैली बनाउँने प्रयास गर्छ। यस्तो अवस्थामा मिथुन राशिले आफ्नो अस्तित्व र आत्मविश्वास गुमाउँने गर्छन्।
मेष र वृश्चिक: एकतर्फी प्रेमले कसरी समस्या उत्पन्न गराउँछ भन्ने कुरा यी दुई राशिको जोडीबाट थाहा पाउँन सकिन्छ।
मेष राशिका व्यक्ति वृश्चिक राशिलाई चाहेर पनि मनाउँन सक्दैनन्, टाढा पनि बस्न सक्दैनन् । मेष र वृश्चिकका राशिले चाहेर पनि प्रेम वा विवाह गर्न नहुने ज्योतिष शास्त्रको भनाई छ।
वृष र धनु: वृष र धनु राशिबीच प्रेम वा विवाह सम्बन्ध भएमा तहस-नहसको स्थिति सिर्जना गर्ने बताइन्छ। बृष राशिका व्यक्तिहरु जे सोच्छन् वा जीवनमा आफूले बनाएको लक्ष्य धनु राशिले परिवर्तन गराउँने अवस्थामा आउँछ।
एकातिर धनु राशिकाले वृषका लाई पूरै परिवर्तन गराउँन चाहन्छन्, तर वृष राशिका परिवर्तन हुन चाहँदैनन्। यसरी यी राशिबीच तालमेल नमिल्ने हुन्छ।
कर्कट र कुम्भ: कर्कट राशिलाई झुट मनपर्दैन, जहाँ कुम्भ राशिले भने सम्बन्धमा धेरै पारदर्शिता राख्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन। त्यसैले, यी राशिबीच तालमेल नमिल्ने हुन्छ र यी बीचको सम्बन्धमा झमेला आउँने बताइन्छ।
सिंह र मीन: मीन राशिका व्यक्ति आफ्नै दुनियाँमा व्यस्त रहने हुन्छन, जहाँ सिंह राशिका लागि भावना देखाउँनु र महसुश गराउँनेमा विश्वास गर्छ।
लामो समयसम्म यौ न क्रि डामा संलग्न हुन चाहनु हुन्छ ? यसो गर्नुस्
एक घण्टा पनि सा’ रि’रि’क सम्प ‘र्क बिना बस्न नसक्ने नायिकाहरु को को हुन भिडियो हेर्नु
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ?
हरेकले आफ्नो नीजि अं’ग का लागि गर्ने यी ७ गल्तीहरु जान्नुहोस्, जीवनका लागि आजै सुधारौ
८९ बर्षको उमेरमा पनि श्रीमतीसंग श्रीमानले यस्तो गर्न खोजेपछि, लाजै नमानी भयो भित्रि कुरा खोलाखोल (भिडीयो सहित)
महिलाका यी अंग छोएपछि हुन्छन् शा; रीरिक स/म्बन्धका लागि तयार
महिलालाई यौ ;न चाहना कतिबेला बढी हुन्छ ? यसो भन्छन महिला!
यौ’न सम्प’र्कका बे’ला महि’लाको स्त’न मि’च्ने कि नमि’च्ने ?
बिहे अघि स’ म्पर्क भएको छ छैन , यी पाँच परिवर्तनबाट थाहा हुन्छ
यौ,न स,म्प,र्कको बेला महिलाहरु किन आँखा बन्द गर्छन ?
से क्सका लागि पुरुष नपाएपछि यसो गर्न थाले पोखराका युवतीहरु
स्त’नलाई टा’इट र आक’र्षक बनाउने यस्ता छन् रो’चक तरिका
से८क्स लागि उचित समय राति कि बिहान ? कारणसहित !